काठमाडौं ट्रान्जिट बनाएर विदेशी नागरिक तस्करी
नारायण अधिकारी | २०७६ भदौ ३१ मंगलबार | Tuesday, September 17, 2019 १७:००:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं– लट्टा पारेको लामो कपाल। पातलो शरीर। कालो वर्ण। हल्का दाह्रीजुँगा। केही फुकेका नाकका पोरा।
यही हुलिया भएका विदेशी मुलको जस्तो देखिने एक युवा करिब दुई महिनाअघि साउन ४ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुग्छन्। त्यसबेला दिनको साढे ३ बजेको हुन्छ।
एयर इन्डियाको उडान नम्बर एआई २१६ मार्फत दिल्ली हुँदै जापान जाने जहाजको टिकट हातमा लिएर ती युवा विमानस्थलको प्रस्थान बिन्दुमा लामबद्ध भए। आफ्नो लगेज बी साइडको एक्स–रे मेसिनमा जाँच गराए। 'द नर्थ फेस' लेखिएको कालो, खैरो र निलो रङ मिसिएको पछाडि भिरेर बोक्ने झोलामा केही शंकास्पद वस्तु भएको मेसिनले डिटेक्ट (पहिचान) गर्‍यो।
त्यही झोलामा फेला परेका थिए, ससानो प्याकेट बनाएर राखिएका केही शंकास्पद वस्तु। लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरको शाखा कार्यालय विमानस्थलमा खटिएका सादा पोसाकका प्रहरीले ती शंकास्पद वस्तु झोलाबाट निकालेर नियाले। पत्ता लागिहाल्यो, त्यहाँ त एम्फेटामाइन अर्थात् आइस ड्रग्स पो रहेछ!
यसरी नेपालको विमानस्थल प्रयोग गरी आइस ड्रग्स लिएर जापान जान लागेका ती युवा थिए, २५ वर्षीय पोर्चुगिज नागरिक टियागो मेन्डस पेरेरा। राहदानी नम्बर- सिए ७०१२९२।
२७ वटा कागजका बक्सहरुमा माथि रुमाल, टाई र त्यसमुनि फल्स बटम बनाएर आइस ड्रग्स लुकाइएको थियो। जसको गन्तव्य थियो, जापान।
पेरेरालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले नयाँनयाँ तथ्य पत्ता लगाउँदै गएको छ। उनी पक्राउ परेपछि उनकै सूचनाका आधारमा थप २ जना पक्राउ परेका छन्। तर प्रहरीले यो कुरा गोप्य रुपमा राखेको छ।
काम झोला बोक्ने, रै'छ ४ करोडको कोकिन
सोही अनुसार आफू नेपाल आएको पेरेराले प्रहरीसमक्ष बताएका छन्। काठमाडौं आएलगत्तै आरेमोसले उनलाई कालो, खैरो र निलो रङ मिसिएको नर्थ फेसको झोला थमाएका थिए। उक्त झोला जापान लैजानुपर्ने जिम्मा थियो पेरेराको। अन्तत: जापान जान नपाउँदै पेरेरा पक्राउ परे। पक्राउ परेपछि उक्त झोला आफूलाई आरेमोसले दिएको बताएपछि त्यही सूचनाका आधारमा आरेमोस पनि पक्राउ परे।
कहाँबाट भित्रियो ४ करोडको आइस ड्रग्स?
आइस ड्रग्स नेपाल भित्रने बेला कुनै सुइँको नपाउनु तर बाहिरिने बेला पक्राउ पर्नुले नेपाल भित्रियो चाहिँ कसरी? यो प्रश्न निकै पेचिलो बनको छ।
ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘आइस ड्रग्स बर्मा, लाओस लगायतका देशमा उत्पादन हुन्छ। ती देशबाट पक्राउ परेका दुवै जना आएको पनि देखिँदैन। भित्रियो कसरी भन्ने कुरा अझै अन्योलमा छ।’
ड्रग्सको अनुसन्धानले खुल्यो मानव तस्करको पोल
यसरी विदेशी र नेपालीको पासपोर्ट बरामद भएपछि प्रहरीले यस सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान बढाएको छ। ब्युरोका एक अधिकारी भन्छन्, ‘लागुऔषध मात्रै होइन उनीहरुले नेपाललाई प्रयोग गरेर विदेशी नागरिकसमेत तस्करी गर्ने गरेको देखिन्छ।’
एक भारतीयसहित ७ जनाबाट लाखौं ठगी
बरामद १७ वटा पासपोर्टमध्ये ६ वटा नेपाली, १ भारतीय थिए भने बाँकी अन्य देशका थिए। ६ नेपाली र १ भारतीय नागरिक दीपु जैसवालबाट उनीहरुले ४/५ लाख रुपैयाँका दरले ३५ ठगी गरेको पाइएको छ।
पक्राउ परेका पोर्चुगिज र गाम्बियन नागरिकका बारेमा थप बुझ्न लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको आग्रहमा नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसिबी) ले इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको छ।
ठूलो मात्रामा लागुऔषध बरामद हुनु र मानव तस्करीमा संलग्न देखिएपछि नेपाल प्रहरीले यसबारे थप बुझ्न इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको हो। इन्टरपोलमा पत्राचार भएसँगै यसभन्दा अघि उनी अपराधमा संलग्न थिए/थिएनन्, यसमा अन्य व्यक्तिको संलग्नता छ/छैन जस्ता कुरा इन्टरपोलमार्फत खोजी गरिनेछ।
मानव तस्करीमा समेत अनुसन्धान
लागुऔषधबाट अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले तीनैजना विरुद्ध ठगी, लागुऔषध, सरकारी कागजात कीर्ते र मानव तस्करीमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
यसरी दिल्लीमा अध्ययनका लागि बसेका गाम्बियन नागरिक आरेमोसले ड्रग्सदेखि मानव तस्करसम्मको ट्रान्जिट नेपाललाई बनाएको पाइएको छ। उनीहरु तीनै जनामाथि अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेकाले प्रहरी मुद्दा दर्ताको तयारीमा छ।